မူလစာမျက်နှာ | Lancaster ၏ကျောင်းခရိုင်
အတည်ပြုပြီးသော SDOL ကျောင်းများရှိ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုများအားလုံးကိုအများသုံး dashboard ပေါ်တွင်သာဖော်ပြထားသည်။ ကြည့်ရှုရန်အောက်ပါ link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ခြားနားချက်တစ်ခုလုပ်ပါ Lancaster ၏ကျောင်းခရိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းရန်အရည်အချင်းရှိသောအရည်အချင်းရှိသောကျွမ်းကျင်သူများကိုရှာဖွေသည်။ ခေါင်းဆောင်မှု၊ သင်ကြားရေးနှင့်ပံ့ပိုးမှုဝန်ထမ်းများအတွက်ချက်ချင်းဖွင့်လှစ်!
Cyber ​​Pathways အကယ်ဒမီ
2034 ၏ McCaskey အတန်းအစားကြိုဆိုပါတယ်! ၂၀၂၁၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မတိုင်မှီ (သို့) မတိုင်မီအသက် ၅ နှစ်အရွယ်နှင့် Lancaster City သို့မဟုတ် Lancaster မြို့နယ်တွင်နေထိုင်သောကလေးများအားလုံးသည် ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက်သူငယ်တန်းအတွက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကကူညီဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ SDoL တွင်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်စိန်ခေါ်မှုများကိုရှာဖွေ။ အဖြေများကိုရှာဖွေရန်အချိန်ပြည့်မိဘ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူးရှိသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိလား။ ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးရန်အောက်တွင်နှိပ်ပါ။
Lancaster ၏ကျောင်းခရိုင်တွင်ယခုနှစ်သင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုငါတို့သိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်သက်သာချောင်ချိရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားပို့ချမှုပုံစံများ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်တိုးမြှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖော်ပြထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အပိုင်းကိုတီထွင်ပြီးပါပြီ။ ပိုမိုလေ့လာရန်အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါ။
မိသားစုများရှင်သန်ကြီးထွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအောင်မြင်သည်။ မိဘ / အုပ်ထိန်းသူများအတွက်တက်ရောက်ခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း၊ ကောလိပ် / အလုပ်အကိုင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစသည့်ခေါင်းစဉ်များရှာဖွေရန်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းများသည်ရပ်ရွာလူထု၏အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်းနှင့်ကျောင်းသားများအားတစ် ဦး ချင်းနှင့်အုပ်စုများမှစေတနာ့ဝန်ထမ်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုတာဝန်ယူတတ်သောဘဏ္beာစိုးများဖြစ်ရခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရိုင်ဘတ်ဂျက် ဦး စားပေးမှုများ၊ အဆောက်အအုံများရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေအခွန်နှင့်စပွန်ဆာပေးခြင်းအခွင့်အလမ်းများကိုလေ့လာပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတက်ကြွလှုပ်ရှားသည့်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားဟောင်းများဖြစ်သောမက်စကကီ Alumni အစည်းအရုံးနှင့် Lancaster ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်ပိုမိုလေ့လာပါ၊ SDoL တွင်သင်ကြားမှုထူးချွန်မှုနှင့်ကျောင်းသား၏အောင်မြင်မှုကိုထောက်ပံ့ခြင်း
Lancaster ကျောင်းခရိုင်သည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်သောတေးဂီတပညာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ NAMM ဖောင်ဒေးရှင်းက Lancaster ကျောင်းကိုခရိုင်မှ ၂၀၂၁ ဂီတပညာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးလူမှုအသိုက်အဝန်းစာရင်းတွင်ဂီတပညာရေးအတွက်အထူးကတိပြုခဲ့သည်။ SDoL သည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိကျောင်းခရိုင် ၆၈၆ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျဆုံးခြင်း 2021 အတွက်သင်ယူမှုရွေးချယ်စရာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းကိုယူပါ
Lancaster ၏ကျောင်းခရိုင်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားပေးသောသင်ကြားပို့ချမှုပုံစံများကိုအကဲဖြတ်ပြီး ၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၂ စာသင်နှစ်အတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုစဉ်းစားနေသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အကြိုက်များကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်ဤစစ်တမ်းတိုတွင်ပါဝင်ပါ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ - ဤစစ်တမ်း၏တုန့်ပြန်မှုများသည်မိဘများသို့မဟုတ်ခရိုင်အားနောက်စာသင်နှစ်အတွက်ရွေးချယ်စရာများအဖြစ်မအပ်ပါ။
Twitter ပေါ်တွင် Retweet SDoL Retweeted
ဒီနေ့ကမ္ဘာ့ Semi-Colon နေ့ပါ! ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ရန်မရွေးချယ်သောကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသူများ၏ဘဝများကိုလည်းဆင်နွှဲကြသည်။ သူတို့၏ဇာတ်လမ်းများမပြီးဆုံးသေးသောကြောင့် သတိရပါ၊
ဗီဒီယိုကို Link ကို:
တွစ်တာ 1383070422590238723 အပေါ် Reply တွစ်တာ 1383070422590238723 အပေါ် Retweet2တွစ်တာ 1383070422590238723 အပေါ်လိုပဲ 4
မှတ်ချက်များကိုထောင့်ကွက် SVG icon များအဆိုပါကဲ့သို့ရှယ်ယာမှတ်ချက်နှင့်တုံ့ပြန်မှု icon များအဘို့တပတ်ရစ်
အဆိုပါ McCaskey အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းဝင်း IU13 မှကျင်းပသောဒေသဆိုင်ရာ Multimedia နှင့်ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲတွင်ကျောင်းသားများသည်ကျောင်းသားများပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများသည် 3D Design တွင်ပထမနှင့်တတိယနေရာများ၊ Animation တွင်နေရာချခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Programming တွင်ထိပ်ဆုံးနေရာသုံးခုကိုရရှိခဲ့သည်။ မေလတွင်ပြည်နယ်ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသူကိုကံကောင်းပါစေ။ ... ပိုကြည့်ရှုပါအောက်ကိုကြည့်ပါ
Facebook ပေါ်မှာ Comment
PSSA: အဆင့် 3-8 ELA
7: 00 ညနေ
6: 00 ညနေ
6: 30 ညနေ
10: 30 နံနက်
8: 00 နံနက်
Eid al-Fitr စတင်သည်
12: 00 ညနေ
အစောပိုင်းထုတ်ပယ်မှု - Secondary + MAR
12: 15 ညနေ
12: 30 ညနေ
အစောပိုင်းထုတ်ပယ်မှု - မူလတန်း
9: 00 နံနက်
ဝါရှင်တန် PAC အစည်းအဝေး - နံနက်
5: 30 ညနေ
ဝါရှင်တန် PAC အစည်းအဝေး - pm တွင်
Virtual Campus PAC အစည်းအဝေး
Lancaster, PA ဆိုပြီး 17603
ParentVUE / ကျောင်းသား
Docs & ပုံစံများ
© 2021, Lancaster ၏ကျောင်းခရိုင်